एउटी वेश्याको पीडा… | Kamsastra
एउटी वेश्याको पीडा…
Sex, एउटी वेश्याको पीडा…, नेपाली यौन कथा, रन्डीसँग,
मेरो जिन्दगी कुनै खेल हैन न त खेल्ने मैदान नै हो मेरो मन्…तर वास्ताबिक्ता अर्कै छ । नचाहदा नचाहदै पनि समाजमा मै हु भन्ने पुरुषहरुले मलाई मैदान नै बनाए । मन लाग्दा सम्म मज्जाले खेल्छन जब थाक्छन् अनी एकछिन अघाउछन त्यही थुकेर मुन्टो फर्काएर हिन्छन । कस्तो कठोर मन ई पुरुष भनाउदा हरुको जब सम्म मेरो पुती मा आफ्नु लाडो हाल्नु पाउदैनन निकै माया देखाउछन । मिठा मिठा कुराहरुले मेरो शरीरमा मन लागि गर्छन् तिमीलाई म माया गर्छु भन्दै मेरो बुबु चुस्छन मेरो पुती चाट्छन तर जब मेरो पुतिमा उनिहरुको लाडो पसाल्छन मलाई थिचोमिचो नै पार्छन । तर म केही भन्नु सक्दिन न त गाली नै गर्न सक्छु न त रिसनै देखाउन सक्छु केवल पिडा अनी थिचोमिचो सहेर केवल त्यो प्यासी पुरुषहरुको कामग्नी शान्त पार्छु यसैमा मेरो भबिस्य छ अनी मेरो सानो छोरी को । कहिले काही School बाट फर्किएकी छोरीले मेरो पिडा अनी मेरो घाऊ हरु आफ्नु तोते बोलिमा बोल्दै प्यारो सानो कलिलो हातहरुले मुसारी दिदा अथाह पिडाहरु कहाँ भागीदिन्छ मलाई नै थाहा हुँदैन । कहिले काही आफ्नु छोरी को भबिष्य देखेर डर पनि लाग्दछ…कतै मेरो छोरी पनि ई समाजका प्यासी पुरुषहरुको नजरमा पर्ने त हैन ? निकै रुन्छु म कहिले काही छोरी लाई च्यापेर । बिचरी आफ्नु Mummy किन रोको होला भनेर एकछिन त टोलाएर मेरो अनुहारमा हेर्छिन जब मेरो आशुको भेल आँखा बाट बग्न थाल्दछ आफ्नु कलिलो हातले मेर आशु पुछ्ने कोशीश गर्छिन । छोरी सानै भएपनी खै उसमा कहाँ बाट त्यत्ती धेरै आउछ ? के के प्रश्न गरेर मलाई रुवाईदिन्छे । एकदिन मलाई सोधेको थीइन Mummy किन नि हजुरले मलाई अर्कै कोठामा सुताउने ? मलाई कस्तो डर लाग्दछ… ।
कसरी भनु छोरी म तिमीलाई आफु सँग सुताउन सक्दिन किन कि मलाई चिक्न आउछ मान्छेहरु… तिमीलाई देख्यो भने रिसाउछन्…. किन कि तिम्रो आमालाई समाजले रण्डिको नाम दिएको छ र तिम्रो आमा तिमीलाई School पढाउन राम्रो नाना मिठो खाना दिन यो सब गर्दै छ … कसरी भनु म यो सब मेरो त्यो सानो छोरीलाई ? कसरी… कसै सँग छैन यो प्रश्न को उत्तर कसै सँग । एकदिन मेरो छोरी ठुलि हुन्छे अनी आफ्नु आमाको असलि अनुहार देखेर पक्कै पनि मलाई घ्रिणा गर्नेछिन अनी आफुले आफुलाई धिक्कार्ने छिन किन म यस्तो रण्डिको कोखमा जन्म लिन पुगे…। म के गरु मलाईनै थाहा छैन घरबेटी आउछ मेरै शरीर सँग खेलेर जान्छ , समाज अनी देशका रक्षक भनाउदाहरु आउछन मेरै शरीरलाई लुछेर लथालिङ्ग पारेर जान्छन कोही त छैन यहाँ हामी जस्तो बेशहराहरु लाई शाहार दिने सबै आफ्नै स्वार्थ पुर्ती गर्छन् मुखले मिठा मिठा कुरा गरेर मनलागी खेलेर जान्छन । कहिले काही त चक्कुले ति पुरुष भनाउदाहरु को लाडो नै काटेर नपुंषक बनाई दिउ जस्तो लाग्दछ तर त्यो पनि म गर्न सक्दिन बिबष छु । म मेरो कथा कसलाई सुनाउ जस्तै लाग्दै थियो आज Janata मार्फत आफ्नु मनको कुराहरु पोख्दै छु । अझैपनी त्यस्ता कैयौ रातहरु अनी दिनहरु आउने छन मेरो जिन्दगीमा म यही Blog मार्फत तपाईंहरुलाई सुनौदै जाने छु… । अहिले मात्रा मेरो यो सानो कथा लेख्दै छु तर त्यो पिडादाई पलहरु को मैले बयान गर्नु अझै बाँकी नै छ ..। क्रमश्….
Labels: Sex, एउटी वेश्याको पीडा…, नेपाली यौन कथा, रन्डीसँग